PressReader - Zululand Eyethu: 2018-03-29 - Baqwashise nge­sifo sama­rabi e-Sun­ny­dale
Baqwashise nge­sifo sama­rabi e-Sun­ny­dale
Zululand Eyethu - 2018-03-29 - NEWS • IZINDABA - Larry Bent­ley
ITHIMBA lokulwa ne­sifo sama­rabi eShowe, elaziwa nge-RA­BIES, li­jove mah­hala izil­wane ez­i­fuy­wayo emakhaya njenga­makati nez­inja, zom­phakathi waseSun­ny­dale, ngoLwe­sithathu.
Kusukela be­qale ngo-9 es­kuseni, basebenze usuku lonke, be­ham­bela umg­waqo nomg­waqo, kulo lonke idol­obha laseShowe.
Kuthe kuphela usuku, bese be­jove iz­inja ezingu-85, amakati am­a­bili nez­im­buzi ez­in­tathu. Iz­im­buzi zilith­walise kanz­ima ithimba ebe­li­zo­jova izil­wane, bezi­phungwa ngezithebe zingabam­beki wena owabona iqembu lomb­hoxo, kodwa ekugci­neni bag­cibe bez­ibam­bile.
Ithimba lamavolon­tiya angu-13, libabonge bonke abenze lo­lusuku lwaba yim­pumelelo, kuh­langan­isa i-Boehringer ngomjovo wa­ma­rabi kanye no-Ald Stan Larkan, ngok­wazisa iza­khamizi ngomkhankaso wa­ma­rabi.
Lelithimba linxusa wonke umuntu ukuba asize empini yokul­wisana na­ma­rabi.Luningi ul­wazi ol­un­gath­o­lakala mayelana ne­sifo sama­rabi, nokuthi yini okumele uyenze uma usu­lun­ywe yisil­wane esina­ma­rabi.
Uma uzithola ulun­ywe yisil­wane esina­ma­rabi, geza isilonda leso nga­manzi nen­sipho imizuzu engu-15, bese uham­bisa lowo muntu ku­dokotela noma es­ib­hedlela, ukuze athole im­i­jovo em­ine ngokushe­sha.
Ungabavumeli abasemtho­lampilo ukuba baku­jikise emuva, futhi ug­cizelele ukuba ukhu­lume nanoma wumuphi umuntu on­gak­weluleka mayelana noku­gonywa kwezil­wane.
Um­biko wa­ma­rabi kusukela kumh­laka 17-23 March
Sh­effield beach (KwaDukuza), Sy­den­ham (eThek­weni), uMlazi (eThek­wini), Com­pen­sa­tion (KwaDukuza), Mont­clair (Dur­ban), Ezin­gol­weni (Ugu) and Ahrens (uMvoti) zonke lezi zin­dawo ku­bikwe iz­ifo za­ma­rabi, en­daweni ngayinye.
Kuhlolwe inkomo, yatholwa inwo ama­rabi en­daweni yak­waMa­phu­mulo, ngaphansi koMasi­pala we­siFunda Ilembe.
Bathathu abantu abashon­ile ngenxa yokukl­we­jwa nga­makati, ngakho abanikazi ba­makati bacelwa ukuba baqinisekise ukuthi amakati abo agonyiwe.
Ra­bies cam­paign in Sun­ny­dale